Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Qadar oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Qadar oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Qadar Sultan Bin Saad Al-Muraikhi ayaa maanta si lama filaan ah kusoo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoona durbadiiba kullamo kala duwan la qaadanaya madaxda sare ee Soomaaliya.
Wafdigaan ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyagoona durbadiiba kullan la yeeshay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre.
Wasiiru dowlahaa arrimaha dibadda ee dalka Qadar Sultan Bin Saad Al-Muraikhi ayaa la sheegayaa inuu sidoo kale kullan la qaadan doonno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Wafdigaan ayaa qorshahooda yahay inay la kulmaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, si ay uga mahad-celiyaan mowqifka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka taagan dowlahada Khaliijka.
Dowladda Qadar ayaa haatan la geliyay go’doomin baahsan oo dhinaca ganacsiga ah, wuxuuna cadaadis aad u weyn kaga imaanayaa xulafadda uu hoggaamiyo dalka Sucuudiga, kadib markii ay dhamaantood xiriirka u jareen.
Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku caddeeysay in xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dowladdaha Khaliijka iyo Qadar ay ka noqon doonto mid dhex-dhexaad ah, iyadoona ku baaqday in xal diblomaasiyadeed lagu dhameeyo khilaafkaas.